नेपालमा अटोमोबाइल्स क्षेत्रको अवस्था, सम्भावना र कोरोना प्रभाव
नेपालमा सवारीको चाप दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । मानिसहरुको व्यस्त जीवनशैली, आम्दानी र समयको बचत लगायतका कारण उनीहरु अहिले निजी सवारी खरिदमा लगानी गरिरहेका छन् । नेपाली बजारमा यतिबेला २ पांग्रे, ३ पांग्रे, ४ पांग्रे लगायत विभिन्न किसिमका सवारी साधनहरुको बाहुल्यता बढेको छ । विगतमा निजी सवारी सम्पन्न व्यक्तिहरुका लागि रोजाईको विषय बन्ने गरेको भएपनि पछिल्ला केहि वर्ष यता अनिवार्य जस्तै हुन थालेको छ । दर्जनौं कम्पनिका सवारी साधनका कम्पनिहरु नेपालमा संचालित भएपनि नेपालमै भने अहिले सम्म कुनै किसिमका सवारीसाधनको उत्पादन हुन भने सकेको छैन ।के छ त अवस्था ?वर्तमान अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने एउटा आधारका रूपमा अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई लिइन्छ । सवारी साधनको व्यापार तथा सवारी साधनबाट अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा पर्ने प्रभावले मुलुकलाई गतिशील बनाउने काम गर्छ । नेपालमा हालसम्म ३५ लाख ३९ हजार ५१९ यातायातका साधनको दर्ता भइसकेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार यो संख्या आर्थिकवर्ष ०४६/४७ देखि ०७५ फागुनसम्मको हो । जसमध्ये बसको संख्या ४९ हजार ३१८ छ । त्यस्तै मिनीबस २५ हजार ५९५, क्रेन, डोजर ९० हजार ४११ र कार, जीप, भ्यान, २ लाख ३७ हजार ६५८ रहेका छन् ।यसैगरि पिकअप ५५ हजार ९७३, माइक्रो ७ हजार ६५८ र टेम्पो ४५ हजार ६७२ छन् । नेपालमा दर्ता भएका सवारी साधनहरु मध्ये मोटर साइकलको संख्या सबैभन्दा वढी छ । २५ लाख ३० हजार ७२२ वटा मोटरसाइकल दर्ता भएका छन् भने ट्याक्टर र पावरटिलरको संख्या १ लाख ४३ हजार ९६२ छ । ई–रिक्साको संख्या २६ हजार ४६६ छ । अन्य सवारीसाधन ७ हजार ६०७ दर्ता भएका छन् । आर्थिकवर्ष ०४६/४७ मा नेपालमा ७६ हजार ३७८ वटा सवारी साधन दर्ता भएकोमा गतवर्ष मात्रै ३ लाख १८ हजार ४७७ वटा दर्ता भएका थिए । ०७४/७५ मा ४ लाख ३७ हजार ६१४ सवारी दर्ता भएका थिए ।देशको अर्थतन्त्रको २५ प्रतिशत हिस्सामुलुकको कुल कर राजस्वमा २५ प्रतिशतको हाराहारीमा सवारीक्षेत्रको योगदान छ । तर, यो क्षेत्रले दिएको योगदान अनुसारको सम्मान पाउन नसकेको नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एशोसिएशनको गुनासो छ । सरकारले अहिले देशको राजस्व संकलनमा सबैभन्दा बढी सवारीकरबाट उठाउने गरेको छ । करिव ३० खर्बको लगानी रहेको यसक्षेत्रबाट हाल वर्षेनी ४ खर्बको हाराहारीमा राजस्व उठ्ने गरेको छ । अहिले विभिन्न प्रदेश अनुसार सवारी कर तोकिएको छ । मोटरसाइकलमा वर्षेनी न्युनतम २ हजार ८५० देखि १२ हजार सम्म छ भने गाडीमा १९ हजार ९०० देखि सिसि अनुसार फरक फरक छ ।
करिव ३० खर्बको लगानी रहेको यसक्षेत्रबाट हाल वर्षेनी ४ खर्बको हाराहारीमा राजस्व उठ्ने गरेको छ
नेपालमा रहेका कम्पनिहरुनेपालमा दर्जनौंको संख्यामा रहेका विभिन्न ब्राण्डका सवारी साधनका कम्पनिहरु छन् । जसमध्ये सुजुकी, हुण्डाई, फक्सवागन, हिरोहोण्डा, बजाज, टाटा , महेन्द्रा, किया लगायत हुन् । यी कम्पनिहरुले २ पाङ्गे तथा ४ पाङ्ग्रे लगायतका सवारी साधनको आयात र बिक्रि गर्ने गरेका छन् ।छिमेकी २ देशमा अटोमोबाइल्सको अवस्थाअटोमोबाइल्स क्षेत्र र देशको अर्थतन्त्रसँगको सम्बन्धबारे हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्रको उदाहरणबाट स्पष्ट हुन सकिन्छ । चीन र भारत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ आर्थिकरूपमा सशक्त बन्दै जाँदा ती देशका अटोमोबाइल्स उद्योगले पनि फड्को मार्दै गएका छन् । अहिले चीन अटोमोबाइल्स वस्तुहरूको विक्री र उत्पादन दुवैमा संसारकै पहिलो राष्ट्र बन्न पुगेको छ । त्यस्तै, भारत पनि अटोमोबाइल्स विक्रीमा विश्वकै चौथो र उत्पादनमा सातौं राष्ट्र बनिसकेको छ । पछिल्ला अध्ययनहरूले पनि दक्षिण एशिया संसारकै सबैभन्दा ठूलो अटोमोबाइल्स बजार बन्ने देखाएको छ । यसले पनि नेपालमा अटोमोबाइल्स बजार विस्तार हुँदै जाने प्रष्ट छ । तर नेपालमा विगत केहि वर्षदेखि अटोमोबाइल्स क्षेत्रको विस्तार सुस्त गतिमा मात्रै हुन थालेको छ । नेपालमा सवारी आयातमा लगाइने गरिएको कर २ सय प्रतिशत भन्दा धेरै छ । र वर्षेनी तिर्नु पर्ने राजस्व निकै उच्च छ तर कर तिरे अनुसार नेपालका सडक स्तरोन्नती नहुँदा दैनिकजसो सवारी दुर्घटना बढ्दो छ ।नेपालमा नाडाको सक्रियतानाडा अटो मोबाईल्स नेपालको आयोजनामा नाडा प्रत्येकवर्ष राजधानीमा नाडा अटो शो कोे आयोजना हुँदै आएको छ । गत वर्ष पनि सवारी साधनहरुको कुम्भ मेला राजधानीमा शुरु भएको थियो । गतवर्ष भदौ १० गतेदेखि १४ औं संस्करणको नाडा अटो शो को आयोजना गरिएको थियो । गतवर्ष यसमेलामा ५ अर्बको कारोबार भएको थियो । तर यसवर्ष कोरोनाका कारण यस किसिमको कुनै कार्यक्रम आयोजन भएन । यसले धेरै नै घाटा पुगेको सम्बद्ध व्यवसायीहरुले बताएका छन् । गत वर्षको प्रदर्शनीमा ४ पाँग्रेका २३ वटा ब्राण्डका गाडीहरुको प्रदर्शनी भएको थियो । सो मेलामा १६० वटा स्टलहरु रहेका थिए ।अटोमोबाइल्स क्षेत्रका समस्याहरूपछिल्लो समय वित्तीय संस्थाले अटोलोनको ब्याजदर घटाएका छन् । यसका साथै देशमा भित्रिने विप्रेषण पनि बढेको छ । तर पनि यातायातका साधनको आयात बढे पनि विक्रि बढ्न सकेको छैन । यसको कारण सडक निर्माणको कार्य सुस्त हुनु र उच्च भन्सारदर रहेको अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरूको भनाइ छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागका अनुसार हालसम्म नेपालभर ६२ हजार किलोमिटर सडकको निर्माण गरिएको छ । यसमध्ये १७ हजार किमि मात्र बाह्रै महिना सवारीसाधन चलाउन योग्य छ । बाँकी सडक मध्ये ग्राभेल र कच्चीसडक नै धेरै छन् । जसमा ६ महिना सवारी चलेपनि ६ महिना बन्द हुन्छ । यस्ता सडकमा सवारी चलाउँदा दुर्घटना हुने सम्भावना बढी हुन्छ । यसले यातायात क्षेत्रलाई हेर्ने नागरिकको दृष्टिकोण पनि नकारात्मक बन्ने अटो व्यवसायीहरू बताउँछन् । सडकको स्तरोन्नति सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।यस्तै अटोमोबाइल्सलाई सरकारले विलासिताको वस्तु अन्तर्गत राखेको छ । त्यसकारण सरकारले चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनमा २ सय ४० र दुई पाङ्ग्रेमा ८० प्रतिशत भन्सार लिने गरेको छ । यसले पनि सवारीसाधन सोचे अनुरुप धेरै मानिसको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । अटोमोबाइल्सलाई अब विलासिताभन्दा पनि आवश्यक वस्तुका रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ ।यस्तै यस व्यवसायमा यातायातका साधनको स्पेयर पार्ट्स को भन्सार मूल्याङ्कनमा पनि सधैं समस्या देखिने गरेको छ । भन्सार विभागले नाडासँग स्पेयर पार्टसको मूल्याङ्कन सम्बन्धमा सुझाव माग्छ । तर व्यवसायीले तोकेर दिएको मूल्याङ्कन दर भने लागू गर्ने गरेको छैन । सरकारले अन्तिममा आफ्नै तरीकाले मूल्याङ्कन पद्धति बसाल्दै आएको छ । यसले पनि व्यवसायमा समस्या खडा हुने गरेको सम्बन्धित व्यवसायीहरु बताउँछन् । यतातिर सरकारले सोच्ने हो भने यो व्यवसाय उकाशिने पक्का छ ।सम्भावना के होला ?यातायातका साधनमा लगाइएको उच्च राजस्वका दरहरू क्रमशः घटाउँदै लगिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ । यसले यातायातका साधनको आयातमा वृद्धि हुनेछ । साथै राजस्व सङ्कलन पनि बढ्दै जाने देखिन्छ । वृद्धि भएको राजस्वबाट थप सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न सहयोग पुग्नेछ । यसका साथै अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा गरिएको लगानीको ग्यारेन्टी हुने हो भने पनि यसमा लगानीको सम्भावना बढ्छ । लगानीको जोखिम उच्च रहेकाले यसमा लगानी गर्नेहरु डराइरहेका छन् ।यातायातमा कोरोना प्रभावविगत ६ महिनादेखि कोरोना प्रभावका कारण सार्वजनिक यातायातहरु साबिक जसरी संचालन हुन सकेका छैनन् । लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण प्रत्यक्षरुपमा असर गरेको क्षेत्र यतिबेला यातायात बनेको छ । ६ महिनासम्म ग्यारेजमा राखिएका सवारी साधनहरु असोज १ गतेदेखि संचालनमा आए पनि विगत जस्तो छैन । ६ महिनाको अवधिमा यातायात क्षेत्रले अर्बौं रुपैयाँको घाटा बेहोरेको छ । अब पहिले जसरी संचालन हुन निकै कठिन बनेको छ । किनकी दैनिक रुपमा कोरोना संक्रमण बढेको छ भने सवारी साधनमा लगानी गर्नेहरुको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कतिपय सवारी साधनहरु कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेकाले व्यवसायीहरु चिन्तित छन् ।
२३ आश्विन २०७७, शुक्रबार १२:५९
नेपालमा सवारीको चाप दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । मानिसहरुको व्यस्त जीवनशैली, आम्दानी र समयको बचत लगायतका कारण उनीहरु अहिले निजी सवारी खरिदमा लगानी गरिरहेका छन् । नेपाली बजारमा यतिबेला २ पांग्रे, ३ पांग्रे, ४ पांग्रे लगायत विभिन्न किसिमका सवारी साधनहरुको बाहुल्यता बढेको छ । विगतमा निजी सवारी सम्पन्न व्यक्तिहरुका लागि रोजाईको विषय बन्ने गरेको भएपनि पछिल्ला केहि वर्ष यता अनिवार्य जस्तै हुन थालेको छ । दर्जनौं कम्पनिका सवारी साधनका कम्पनिहरु नेपालमा संचालित भएपनि नेपालमै भने अहिले सम्म कुनै किसिमका सवारीसाधनको उत्पादन हुन भने सकेको छैन ।
के छ त अवस्था ?
वर्तमान अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र गतिशील बनाउने एउटा आधारका रूपमा अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई लिइन्छ । सवारी साधनको व्यापार तथा सवारी साधनबाट अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा पर्ने प्रभावले मुलुकलाई गतिशील बनाउने काम गर्छ । नेपालमा हालसम्म ३५ लाख ३९ हजार ५१९ यातायातका साधनको दर्ता भइसकेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार यो संख्या आर्थिकवर्ष ०४६/४७ देखि ०७५ फागुनसम्मको हो । जसमध्ये बसको संख्या ४९ हजार ३१८ छ । त्यस्तै मिनीबस २५ हजार ५९५, क्रेन, डोजर ९० हजार ४११ र कार, जीप, भ्यान, २ लाख ३७ हजार ६५८ रहेका छन् ।
यसैगरि पिकअप ५५ हजार ९७३, माइक्रो ७ हजार ६५८ र टेम्पो ४५ हजार ६७२ छन् । नेपालमा दर्ता भएका सवारी साधनहरु मध्ये मोटर साइकलको संख्या सबैभन्दा वढी छ । २५ लाख ३० हजार ७२२ वटा मोटरसाइकल दर्ता भएका छन् भने ट्याक्टर र पावरटिलरको संख्या १ लाख ४३ हजार ९६२ छ । ई–रिक्साको संख्या २६ हजार ४६६ छ । अन्य सवारीसाधन ७ हजार ६०७ दर्ता भएका छन् । आर्थिकवर्ष ०४६/४७ मा नेपालमा ७६ हजार ३७८ वटा सवारी साधन दर्ता भएकोमा गतवर्ष मात्रै ३ लाख १८ हजार ४७७ वटा दर्ता भएका थिए । ०७४/७५ मा ४ लाख ३७ हजार ६१४ सवारी दर्ता भएका थिए ।
देशको अर्थतन्त्रको २५ प्रतिशत हिस्सा
मुलुकको कुल कर राजस्वमा २५ प्रतिशतको हाराहारीमा सवारीक्षेत्रको योगदान छ । तर, यो क्षेत्रले दिएको योगदान अनुसारको सम्मान पाउन नसकेको नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एशोसिएशनको गुनासो छ । सरकारले अहिले देशको राजस्व संकलनमा सबैभन्दा बढी सवारीकरबाट उठाउने गरेको छ । करिव ३० खर्बको लगानी रहेको यसक्षेत्रबाट हाल वर्षेनी ४ खर्बको हाराहारीमा राजस्व उठ्ने गरेको छ । अहिले विभिन्न प्रदेश अनुसार सवारी कर तोकिएको छ । मोटरसाइकलमा वर्षेनी न्युनतम २ हजार ८५० देखि १२ हजार सम्म छ भने गाडीमा १९ हजार ९०० देखि सिसि अनुसार फरक फरक छ ।
नेपालमा रहेका कम्पनिहरु
नेपालमा दर्जनौंको संख्यामा रहेका विभिन्न ब्राण्डका सवारी साधनका कम्पनिहरु छन् । जसमध्ये सुजुकी, हुण्डाई, फक्सवागन, हिरोहोण्डा, बजाज, टाटा , महेन्द्रा, किया लगायत हुन् । यी कम्पनिहरुले २ पाङ्गे तथा ४ पाङ्ग्रे लगायतका सवारी साधनको आयात र बिक्रि गर्ने गरेका छन् ।
छिमेकी २ देशमा अटोमोबाइल्सको अवस्था
अटोमोबाइल्स क्षेत्र र देशको अर्थतन्त्रसँगको सम्बन्धबारे हाम्रा दुई छिमेकी राष्ट्रको उदाहरणबाट स्पष्ट हुन सकिन्छ । चीन र भारत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ आर्थिकरूपमा सशक्त बन्दै जाँदा ती देशका अटोमोबाइल्स उद्योगले पनि फड्को मार्दै गएका छन् । अहिले चीन अटोमोबाइल्स वस्तुहरूको विक्री र उत्पादन दुवैमा संसारकै पहिलो राष्ट्र बन्न पुगेको छ । त्यस्तै, भारत पनि अटोमोबाइल्स विक्रीमा विश्वकै चौथो र उत्पादनमा सातौं राष्ट्र बनिसकेको छ । पछिल्ला अध्ययनहरूले पनि दक्षिण एशिया संसारकै सबैभन्दा ठूलो अटोमोबाइल्स बजार बन्ने देखाएको छ । यसले पनि नेपालमा अटोमोबाइल्स बजार विस्तार हुँदै जाने प्रष्ट छ । तर नेपालमा विगत केहि वर्षदेखि अटोमोबाइल्स क्षेत्रको विस्तार सुस्त गतिमा मात्रै हुन थालेको छ । नेपालमा सवारी आयातमा लगाइने गरिएको कर २ सय प्रतिशत भन्दा धेरै छ । र वर्षेनी तिर्नु पर्ने राजस्व निकै उच्च छ तर कर तिरे अनुसार नेपालका सडक स्तरोन्नती नहुँदा दैनिकजसो सवारी दुर्घटना बढ्दो छ ।
नेपालमा नाडाको सक्रियता
नाडा अटो मोबाईल्स नेपालको आयोजनामा नाडा प्रत्येकवर्ष राजधानीमा नाडा अटो शो कोे आयोजना हुँदै आएको छ । गत वर्ष पनि सवारी साधनहरुको कुम्भ मेला राजधानीमा शुरु भएको थियो । गतवर्ष भदौ १० गतेदेखि १४ औं संस्करणको नाडा अटो शो को आयोजना गरिएको थियो । गतवर्ष यसमेलामा ५ अर्बको कारोबार भएको थियो । तर यसवर्ष कोरोनाका कारण यस किसिमको कुनै कार्यक्रम आयोजन भएन । यसले धेरै नै घाटा पुगेको सम्बद्ध व्यवसायीहरुले बताएका छन् । गत वर्षको प्रदर्शनीमा ४ पाँग्रेका २३ वटा ब्राण्डका गाडीहरुको प्रदर्शनी भएको थियो । सो मेलामा १६० वटा स्टलहरु रहेका थिए ।
अटोमोबाइल्स क्षेत्रका समस्याहरू
पछिल्लो समय वित्तीय संस्थाले अटोलोनको ब्याजदर घटाएका छन् । यसका साथै देशमा भित्रिने विप्रेषण पनि बढेको छ । तर पनि यातायातका साधनको आयात बढे पनि विक्रि बढ्न सकेको छैन । यसको कारण सडक निर्माणको कार्य सुस्त हुनु र उच्च भन्सारदर रहेको अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरूको भनाइ छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागका अनुसार हालसम्म नेपालभर ६२ हजार किलोमिटर सडकको निर्माण गरिएको छ । यसमध्ये १७ हजार किमि मात्र बाह्रै महिना सवारीसाधन चलाउन योग्य छ । बाँकी सडक मध्ये ग्राभेल र कच्चीसडक नै धेरै छन् । जसमा ६ महिना सवारी चलेपनि ६ महिना बन्द हुन्छ । यस्ता सडकमा सवारी चलाउँदा दुर्घटना हुने सम्भावना बढी हुन्छ । यसले यातायात क्षेत्रलाई हेर्ने नागरिकको दृष्टिकोण पनि नकारात्मक बन्ने अटो व्यवसायीहरू बताउँछन् । सडकको स्तरोन्नति सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
यस्तै अटोमोबाइल्सलाई सरकारले विलासिताको वस्तु अन्तर्गत राखेको छ । त्यसकारण सरकारले चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनमा २ सय ४० र दुई पाङ्ग्रेमा ८० प्रतिशत भन्सार लिने गरेको छ । यसले पनि सवारीसाधन सोचे अनुरुप धेरै मानिसको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । अटोमोबाइल्सलाई अब विलासिताभन्दा पनि आवश्यक वस्तुका रूपमा लिनुपर्ने देखिन्छ ।
यस्तै यस व्यवसायमा यातायातका साधनको स्पेयर पार्ट्स को भन्सार मूल्याङ्कनमा पनि सधैं समस्या देखिने गरेको छ । भन्सार विभागले नाडासँग स्पेयर पार्टसको मूल्याङ्कन सम्बन्धमा सुझाव माग्छ । तर व्यवसायीले तोकेर दिएको मूल्याङ्कन दर भने लागू गर्ने गरेको छैन । सरकारले अन्तिममा आफ्नै तरीकाले मूल्याङ्कन पद्धति बसाल्दै आएको छ । यसले पनि व्यवसायमा समस्या खडा हुने गरेको सम्बन्धित व्यवसायीहरु बताउँछन् । यतातिर सरकारले सोच्ने हो भने यो व्यवसाय उकाशिने पक्का छ ।
सम्भावना के होला ?
यातायातका साधनमा लगाइएको उच्च राजस्वका दरहरू क्रमशः घटाउँदै लगिनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ । यसले यातायातका साधनको आयातमा वृद्धि हुनेछ । साथै राजस्व सङ्कलन पनि बढ्दै जाने देखिन्छ । वृद्धि भएको राजस्वबाट थप सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न सहयोग पुग्नेछ । यसका साथै अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा गरिएको लगानीको ग्यारेन्टी हुने हो भने पनि यसमा लगानीको सम्भावना बढ्छ । लगानीको जोखिम उच्च रहेकाले यसमा लगानी गर्नेहरु डराइरहेका छन् ।
यातायातमा कोरोना प्रभाव
विगत ६ महिनादेखि कोरोना प्रभावका कारण सार्वजनिक यातायातहरु साबिक जसरी संचालन हुन सकेका छैनन् । लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण प्रत्यक्षरुपमा असर गरेको क्षेत्र यतिबेला यातायात बनेको छ । ६ महिनासम्म ग्यारेजमा राखिएका सवारी साधनहरु असोज १ गतेदेखि संचालनमा आए पनि विगत जस्तो छैन । ६ महिनाको अवधिमा यातायात क्षेत्रले अर्बौं रुपैयाँको घाटा बेहोरेको छ । अब पहिले जसरी संचालन हुन निकै कठिन बनेको छ । किनकी दैनिक रुपमा कोरोना संक्रमण बढेको छ भने सवारी साधनमा लगानी गर्नेहरुको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कतिपय सवारी साधनहरु कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगेकाले व्यवसायीहरु चिन्तित छन् ।
Prevलमजुङमा कर कार्यालय सञ्चालनमा
दैनिक जीवनमा उपयोगी बन्दै रोलिङ नेक्ससNext